China OEM 531969112717 ထွန်စက် Zetor အတွက် ဘရိတ်မာစတာဆလင်ဒါ စက်ရုံနှင့် ပေးသွင်းသူများ |Hipsen
ချိန်ညှိနိုင်သော ဘရိတ်အချိုးအစား Valve
Pressure Residual Valve
Peugeot / Citroen တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြား (လိုင်းများနှင့် ကိရိယာများ)
ဆိုင်ကယ် / ATV / UTV အစိတ်အပိုင်းများ
ဆောက်လုပ်ရေး စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ
Massey Ferguson ထွန်စက်
ZETOR / Ursus ထွန်စက်
Ford / New Holland / CASE / John Deere စိုက်ပျိုးရေးစက်ပစ္စည်း
VOLVO တည်ဆောက်မှု စက်ပစ္စည်း
OEM 531969112717 ထွန်စက် Zetor အတွက် ဘရိတ်မာစတာဆလင်ဒါ
ကားထုတ်လုပ်သည်- Ursus ထွန်စက်
အရောင်- အဝါရောင်သွပ်ပြားနှင့် အနက်ရောင် အီးဆေး
ကုန်ထုတ်စွမ်းအား- 10000000 Pcs
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး- သမုဒ္ဒရာ၊ မြေ၊ လေကြောင်း၊ အမြန်
ထောက်ပံ့နိုင်မှု: 10000000 Pcs
ဆိပ်ကမ်း: ရှန်ဟိုင်း၊ Ningbo၊ Quzhou
ငွေပေးချေမှုအမျိုးအစား- L/C၊ T/T၊ D/P၊ Western Union
Incoterm: FOB၊ CFR၊ CIF
Delivery အချိန်: 30 ရက်
ဘရိတ်မာစတာဆလင်ဒါကို သံ သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။OEM 531969112717 ဘရိတ်မာစတာဆလင်ဒါသည် ထွန်စက် Zetor အတွက် သင့်လျော်သည်။ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် Zetor၊ Ursus နှင့် ZTS အတွက်လည်း သင့်လျော်သည်။Zetor အကြောင်း၊ ဘရိတ်မာစတာဆလင်ဒါသည် 7011၊ 7045၊ 7045H၊ 7211၊ 7245၊ 7245H၊ 7320T၊ 7320M၊ 7321၊ 7340T၊ 7340M၊ 7341၊ 7245H၊ 7320T၊ 7320M၊ 7321၊ 7340T၊ 7340M၊ 7341၊ 751420၊ 751420၊Urus အကြောင်း၊ ၎င်းသည် C385 နှင့်ကိုက်ညီသည်။ZTS အကြောင်း၊ ဘရိတ်မာစတာဆလင်ဒါကို 8211၊ 8245၊ 100 11၊ 100 45၊ 102 45၊ 120 11၊ 120 45၊ 122 45၊ 123 45၊ 160 45 တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အခြားဘရိတ်အစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့ Valve ကို လိုအပ်ပါက၊ ၊ ဘရိတ်ဘီးဆလင်ဒါ ၊ ဘရိတ်ချပ် / ရဟတ် ၊ ဘရိတ် Pad / ဘရိတ်ဖိနပ် နှင့် အခြားအရာများ ၊ သင်၏ လိုအပ်ချက်အသေးစိတ်များ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် စစ်ဆေးပါ။
Quzhou Hipsen Vehicle Parts Co., Ltd (အတိုကောက် "HBS")2015 ခုနှစ်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော အရင်းအနှီး ယွမ် ၅ သန်းဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစွမ်းရည်၊ ထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဆောက်အအုံဧရိယာသည် 3000 စတုရန်းမီတာဖြစ်သည်။
Brake Proportioning Valves၊ Brake Master Cylinders၊ Brake Calipers နှင့် Hydro-Boosters... စသည်တို့ကဲ့သို့ ဒစ်ဘရိတ် အစိတ်အပိုင်းများကို လစဉ် 300K ကျော် ထုတ်လုပ်ပါသည်။
Oသင့်ထုတ်ကုန်များသည် အရည်အသွေးအဆင့်နှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ကုန်ကျစရိတ်အပေါ် အလွန်တည်ငြိမ်သော လိုက်လျောညီထွေရှိခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာမှ လူကြိုက်များပါသည်။ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ကုမ္ပဏီသည် Ford OtoSan၊ Polaris၊ Electra Meccanica Vehicle (Canada), REE, Cardone… အစရှိသည့် နာမည်ကောင်းဖောက်သည် 100 ကျော်နှင့် တည်ငြိမ်ပြီး ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်ထားသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်က "ယာဉ်မောင်းဘေးကင်းရေး၏အုပ်ထိန်းသူ”ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ဓာတ်မှာ "Work Together၊ Strive For Better" သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အကောင်းဆုံးဘရိတ်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူဖြစ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပြိုင်ဆိုင်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါမည်။
2. ISO/TS16949 ၏ spec အရ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင် OEM/ODM SOP။
3. ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့မှ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာပံ့ပိုးမှု။
4. သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက် ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့် လျှပ်စစ်ဘရိတ်များ၏ ထုတ်ကုန်အပြည့်အစုံ။
5. စင်ထုတ်ကုန်များအတွက်အမိန့်အသစ်များ၏အတည်ပြုချက်အပေါ် 20 ~ 30 ရက်နှင့်အတူအမြန်ဦးဆောင်အချိန်။
6. ကျွန်ုပ်တို့သည် Ningbo ၏အကြီးဆုံးပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းများအနီး Quzhou တွင်တည်ရှိပြီး ဆိပ်ကမ်းများသို့ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရန်အတွက် အဆင်ပြေသော (မိုင် 300 ဝန်းကျင်မောင်းနှင်ခြင်း)။
အတိုင်းအတာ၊ ပစ္စည်း၊ ပမာဏနှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့ သင့်လိုအပ်ချက်နှင့် ဆက်သွယ်ရန် နည်းလမ်းကို ပြောပြပါ။
T/T၊ L/C၊ Western Union စသည်ဖြင့်။အများအားဖြင့်၊ ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်အတွက် 50% အပ်ငွေလိုအပ်ပြီး ပို့ဆောင်မှုမပြုမီ လက်ကျန်ငွေ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုသို့ မသွားရောက်မီ သင့်အား နမူနာများကို ကမ်းလှမ်းပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် TS16949 နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းမျဉ်းများအောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်သည်။
သင့်ငွေပေးချေပြီးနောက် 30-60 ရက်အတွင်း ကုန်ပစ္စည်းများသည် အများအားဖြင့် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။
အံ့သြဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။အဆင်သင့်ဖြစ်ချိန်ကို သိရှိရန် စာရင်းသွင်းပါ။
ယခင်- ZTS Ursus အတွက် OEM 531983296019 ပါသော ဘရိတ်ဘီးဆလင်ဒါများ
နောက်တစ်ခု: OEM# 45510-HM3-901 ပါရှိသော Honda Hand Brake Master Cylinder
Ford အသစ်အတွက် ဘရိတ်မာစတာဆလင်ဒါ ပြုပြင်ရေးကိရိယာများ
ဘရိတ်မာစတာဆလင်ဒါသည် CASE IH ထွန်စက်နှင့် အံကိုက်...
JCB အတွက် OEM 04/500231 ပါရှိသော Clutch Disc Plate
OEM 531-900-922-500 ဖြင့် ဘရိတ်မာစတာဆလင်ဒါ...
OEM JCB ဖြင့် JCB အတွက် Friction Clutch Disc Plate...
JCB အတွက် OEM 15/920396 ဖြင့် အနောက်ဘရိတ်အုပ်များ အနားသပ်
လိပ်စာ-အမှတ် ၁၉၊ DongGang 2nd Road၊ QuZhou၊ ZheJiang၊ PRChina